Tantara ratsy ao amin'ny Fiangonana – 2trondro
Home / Fiangonana / Issues / Tantara ratsy ao amin'ny Fiangonana
Hoy ny tenin'i Papa Saint Gregory Lehibe, "Tsy misy manao ratsy kokoa ny Fiangonana noho izy, izay manana ny anaram-boninahitra na ny laharana ny fahamasinana, manao diso fangataka " (Pastoral Care).
Hoy i Jesosy Kristy araka ny in Matthew 18:5, "Na iza na iza mahatonga ny dia iray aza amin'ireny madinika mino Ahy amin'ny ota, fa ho tsara kokoa ho azy ny manana lehibe fikosoham-bary ny vozony nohomboany manodidina, ary mba ho natsipy tany amin 'ny halalin' ny ranomasina. "
Zava-nitranga ao amin'ny Fiangonana, toy ny vao haingana sex mpisorona fanararaotana tantara ratsy, Mijoro ho vavolombelona ny amin'ny ota ny toetra maha-olombelona, fa ny fikasana koa ny zava-misy fa ny devoly dia miezaka mafy ny hisintona ho fanahy maro araka izay azo atao any an-davaka niaraka taminy teo anoloan'ny fiverenan'i Kristy. Fa ny fahavalo dia miasa mafy miezaka ny hanimba fanahy ao amin'ny Fiangonana dia tsy tokony hahagaga antsika, fa toa ho sarotra miasa teo ivelany, koa. Fantatr'i Satana tsara indrindra fa ny fianjeran'i mpitarika kristianina manana ny vokatry ny handringana ny finoana ny olona nanodidina azy (jereo Matthew 26:31). Raha tsy nahomby ny tetika mba hahatonga ny maro-sitrak'Andriamanitra mahery mpisorona izay nijanona ho mahatoky amin'ny Tompo mba tafintohina, izy ihany no mila malemy vitsivitsy-sitrak'Andriamanitra ireo mba hamoronana voka.
Mahatahotra toy ny specter ny tantara ratsy ato amin'ny Fiangonana dia, na izany aza, dia tokony tsy hahatonga na iza na iza ho very ny finoany. Ary tsy tokony izany ve ho ampiasaina mba hiantso ny Fiangonana masina ho fanontaniana. Miantso ny Fiangonana masina, tsy noho ny fahamasinana ny ny mpikambana, fa noho ny fahamasinan'ny Ny Mpanorina, Jesoa Kristy (jereo Isaia 6:3; John 8:46; ary ny Bokin'i Fanambarana 4:8).
Araka ny endrik'Andriamanitra Kristy, tena Andriamanitra sy tena olombelona, ny Fiangonana dia manana sady masina sy ny maha-olombelona.
Ny toetra araka an'Andriamanitra-ny fampianarana sy ny sakramenta, ireo zavatra nomena azy avy amin'Andriamanitra-dia tanteraka.
Ny toetra maha-olombelona ny mpikambana-dia antsoina hoe mba ho tonga lafatra, ary eo an-dalam ny natao toy izany (jereo Matthew 5:48 ary Katesizin'ny Fiangonana Katôlika 1550). Ny Fiangonana dia tsy azo omena tsiny noho ny tsy mibebaka ny mpanota ao anatin'ny daharana, izay miaina ao amin'ny tsy fankatoavana ny fampianarany sy ny fanaovana ny fanesoana ny sakramenta, fa ny mpitarika ao amin'ny Fiangonana dia afaka ary tokony ho tompon'andraikitra noho ny mahomby ny ho mpanompo tsara.1
Nampitandrina ny mpanara-dia an'i Jesosy fa hisy tantara ratsy ao amin'ny Fiangonany, mampitaha ny fanjakan'ny lanitra ho any an-tsaha feno vary sy ny tsimparifary amin'ny Matthew 13:24. Ao amin'ny fanoharana, ny mpanompon'ny tompony tonga mba hanontany azy,
"Tompoko, no aza mamafy voa tsara tany an-tanimbarinao? Ka ahoana no dia TSIMPARIFARY?"; ny tompony valiny, "Fahavalo no nanao izany." Ary rehefa manolotra ny mpanompony handeha hanangona ny ahi-dratsy, ny tompony valiny, "Tsy misy; fandrao amin'ny fanangonana ny ahi-dratsy ianao ny vary hongotanareo miaraka aminy. Aoka izy ireo hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin'ny fararano; ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja, Angony aloha ny tsimparifary ka afatory ho amboarany mba hodorana, fa ny vary ho any an-tsompitro. " (13:27-30)
Ireo mpikambana ao amin'ny Fiangonana, avy eo, tokony mba ho vonona hiaritra ny fitondran-tena manafintohina ny sasany ao anatin'ny ny laharana mandra-pahatongan'ny ny fiverenan'ny Tompo.
Raha ny Fiangonana Katolika, ary indrindra ny Eveka sy ny Pretra, dia marina nahazo faneso sy fahatezerana ho an'ny mpisorona vao haingana firaisana ara-nofo fanararaotana fanafintohinana izay naka toerana, maro no tsy mahafantatra ny zava-misy fa efa naka ny eveka mahery vaika fepetra mba hamaranana ny fanararaotana ny zaza tsy ampy taona amin'ny mpitondra fivavahana ao am-piandohan'ny taona 1990, folo taona mahery talohan'ny tantara voalohany ny herisetra niseho tao amin'ny Globe Boston in 2002.
Soa ihany–tamin'ny fotoana nanoratana ity–noho ny politika sy ny ezaka navoaka ny Eveka, tsy iray raharaha ny herisetra mety ho hita ao amin'ny Arsidiosezin'i Boston, ny ivon'ny ny krizy, rehefa 1993.2. Hita tamin'ny fanadihadiana nataon'ny amin'ny Washington Post, koa, nampiseho fa ny lasa 40 taona latsaky ny 1.5 isan-jato ny mpanao mpisorona no nampangaina ho ny ara-nofo amin'ny zaza tsy ampy taona fanararaotana.3 Toy izany koa, ny fanadihadiana ny New York Times hita fa 1.8 isan-jato ny mpisorona notendrena avy 1950 ny 2001 efa niampanga.4 Fanadihadiana ihany koa ny zava-nitranga nampiseho fa tahan'ny ny fanararaotana ara-nofo amin'ny zaza tsy ampy taona avo amin'ny asa matihanina hafa sy ny andrim-panjakana, toy ny fampianarana, ary koa ao amin'ny fiangonana Katolika tsy.5
Mazava ho azy, Na ahoana na ahoana ny fanararaotana ambony 0.00% ao amin'ny Fiangonana, ary na aiza na aiza-kafa noho izany zavatra izany, ny mpanota, diso, mampidi-doza, ary Tsy nampino sarotra ny mamela heloka, ary ny fahotana eo amin'ny fiaraha-monina, amin'ny ankapobeny, Tsy mampihena na amin'ny fomba mahatsiravina hampihena ny fitondran-tena ny iray (kely) vitsy an'isa ny mpisorona sy ny olon-kafa, fa toy ny mpikamban'ny Fiangonana, dia tsy maintsy mahatsapa fa fihetsika toy izany ho hevitry ny teny milaza fitondran-tena hampihenana ny teny fahefana sy tsy maintsy miezaka ny manao ny anjarantsika mba hisorohana ny toy izany fitondran-tena maloto avy amin'ny reoccurring.
Fa na inona na inona antony, ny Tompo, dia namela ireo tantara ratsy ho tonga ao amin'ny Fiangonana. Mino izahay fa miaraka amin'ny fanampiany manimba ireo zava-nitranga dia mety ho lasa catalysts ho ny fanavaozana ny finoana. Rehefa manao izany, Izy dia, fanindroany, aoka ny fanapahana tanteraka ny ratsy.
Ao na ny Testamenta Taloha sy Vaovao, misy ohatra maro ny mpitondra tsy mahomby. A fohy lisitra ahitana ny Mpanjaka Davida nandamina ny hanana lehilahy maty mba haka ny vadiny (Jereo ny Bokin 'i Samoela Faharoa 11:2); Zanak'i Davida, Mpanjaka Solomona, manana-jatony ny vady sy vaditsindrano (Voalohany Bokin 'Mpanjaka 11:3); lehilahy culte fivarotan-tena an-kianjan'ny tempoly (Bokin'ny Mpanjaka Faharoa 23:7); sy tamin'ny andron'i Jeremia, mpitarika isan-karazany, mpisorona, ary ny mpaminany dia meloka ny fanolorana sorona zaza (Jeremia 32:32-35). Na dia eo aza ireo tantara ratsy sy ny maro hafa ao amin'ny Testamenta Taloha, ary na dia teo aza ny fivadiham-pitokiana Israely Andriamanitra, dia tsy nitsahatra ny voafidy ho ny olona (jereo John 4:22). Andriamanitra mitandrina ny fanekempihavanana Ataony amin'ny zanany, eny fa na dia tsy loza tokoa ny hihazona ny ny faran'ny ny fifanarahana fa (Jereo Paoly Taratasy ho An'ny Romanina 3:3-4). Toy izany koa, ao amin'ny Testamenta Vaovao, iray amin'ireo Apôstôly namadika azy ho 30 sekely volafotsy; Ny lehiben'ny Apôstôly nandà fantany Azy; ary ny rehetra fa iray nandao Azy ny sisa amin 'ny fotoanany ny tena mila (jereo Mark 14:43). Taorian'ny ny Fitsanganana amin'ny maty, Saint Thomas nety nino ny Tompo efa nitsangana (John 20:24-25); Saint Petera meloka ny tsy fandeferana (Jereo Paoly Taratasy ho An'ny Galatianina 2:11-14); ary Saint Paul nanaiky, "Tsy azoko ny ny asa. Fa tsy manao izay tiako, fa manao ny zavatra tena halako " (Paoly Taratasy ho An'ny Romanina ny 7:15). Ny Fiangonana dia efa lavo ny mpamorona Men, koa. ↩
C.T. Maier sy Robert P. Lockwood, “Fiangonana Response to Firaisana Ara-nofo Herisetra nisy ela be talohan'ny krizy ny 2002,” Pittsburgh Katolika, Jona 8, 2007, p. 1, 6 ↩
“Mpitondra fivavahana Fanararaotana in Context: Mpampianatra firaisana Mpianatra Far-mahadomelina matetika,” LifeSiteNews.com, Février 6, 2004; tamin'ny fitanisàna ny tatitra avy amin'ny Katolika League for ara-pivavahana sy ny fahalalahana sivily. ↩
“In 2002, Fanompoana Resources nitatitra tamin'ny fanadihadiana pirenena izy ireo nitarika izay nihevitra fa 'Na dia eo aza lohateny nifantoka tamin'ny mpisorona olana ao amin'ny Eglizy Katolika, ankamaroan'ny fiangonana amerikana ho nikapoka-jaza ara-nofo-fanararaotana fiampangana ireo Protestanta. Ny loatra zava ny fanararaotana ny mpampianatra dia vao mainka mahavariana, Mitovy amin'ny 1988 fanadihadiana ao amin'ny Boky Torolalana amin'ny fametavetana ankizy manambara. Dia nitatitra fa 'iray amin'ny efatra ankizivavy, ary ny iray amin'ny enina ankizilahy, dia nametaveta (ny mpampianatra) rehefa feno 18 taona '” (cit.). ↩